Nkqo Aluminium Return Air Grille
Umgangatho weAluminium yoMgangatho weRejista yoMgangatho
Ukubhaliswa kweenkuni Ukubhalisa kwiFlushmount kuMgangatho wentsimbi ...
IRejista yePlastiki ebhalisiweyo kuMgangatho weRejista yeABS White ...
Ubhaliso lweenkuni Umgangatho we-Oak
I-Steel Baseboard ibuyise i-Air Grille White
Izixhobo-i-Air-Deflector-for-Floor Register-PC kunye ne-PS
UPC Plastic Tube uqinisa
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, ityhubhu yethu yeplastikhi yetyhubhu yamkelwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, ziyafumaneka kwimodeli esemgangathweni okanye ekhuselekileyo ye-plenum.
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, izikhonkwane zethu zokufaka izikhonkwane zisetyenziselwa ukukhwela imibhobho ezindongeni, iisilingi nakwimigangatho. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi iYurophu, Middle East naseAsia. Kwakhona umphezulu woqhakamshelwano wesangqa esingezantsi nesezantsi sineeplastiki ezimbini ngaphakathi.
Indibano yeNdawo yokuXhasa iPayipi nge-U-bolt
Njengomnye weendawo ezixhomisa amehlo kukhuphiswano lwenkampani, indibano yethu yolungelelwaniso yenkxaso yombhobho kunye ne-U-bolt yenzelwe ukuxhasa umbhobho othe tye kwii-stanchions apho kufuneka uhlengahlengiso nkqo. Kwaye ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
I-DWV Pipe hanger isetyenziselwa ukuxhoma umbhobho wobhedu kwinto
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, i-DWV yethu yombhobho yokuxhoma inokubonelela ngokufakwa ngokukhawuleza. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, ukuvala isikrufu kunokugcina umbhobho ukhuselekile ngokwendlela.
Isefu yomoya kwalenza umbhobho uqinisa ngerabha
Njengenye yokuxhoma kukhuphiswano lwenkampani, umbhobho wethu wentsimbi osetyenziselwa ukuhambisa umoya werabha yenzelwe inkqubo yokutshixa okukhawulezayo. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eYurophu naseAsia. Kwakhona, i-EPDM yerabha yelinen isetyenziselwa ingxolo.
I-Wood Diffuser Solid Oak Baseboard Diffuser Oak yendalo kunye ne-Oak Light
Ulwakhiwo lwe-oki oluqinileyo
I-faceplate esusekayo yokufakwa kwe-esay kunye nokucoca
Ukugqitywa kokufumaneka: I-Oak yendalo, i-Oak Light
16 Gauge yentsimbi Boca Plate
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iipleyiti zethu zeBoca zifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika.
I-41 * 21 C-Channel yeNkqubo yeNkxaso yeChannel yentsimbi ngeeHole ezibiweyo
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ii-c-channel zethu zisetyenziselwa amathuba amaninzi okuhlanganisa izixhobo. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Umsebenzi onzima J-kwendawo yokuhlala omnye-Piece Pipe Umtya
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, umsebenzi wethu onzima j-hanger ufumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Ubhaliso lweenkuni Ubhaliso loMgangatho weFlushmount kunye neDamper eQinisekisiweyo yentsimbi
* Ukucaciswa * Ukupakisha kunye nokuPakisha ngenqanawe ngesiqhelo ii-20pcs / ibhokisi okanye ixesha elikhokelwayo lokuKhokela kwiintsuku ezingama-30 emva komyalelo oqinisekisiweyo ePort Wuhu, eShanghai, e-Ningbo ngokuhambisa ngolwandle; ngomoya; Ngokuchaza ixesha lesampulu Malunga neentsuku ezisi-7 * Izicelo zisetyenziswa kakhulu kwizakhiwo zokuhlala. * Ngaba iMveliso ingqina njani ukuba uMgangatho wayo? . Ulawulo oluphantsi lwe-Damper Control: Isitshixo esitsala sokonga indawo sisebenza ngokulula. . Akukho miqolo ibukhali: Ukunyathela okuthe ngqo kunye nokugqitywa kwesandla kuqinisekisa ukuba ...
Plastic Tube uqinisa
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ityhubhu yethu yeplastikhi yetyhubhu iyafumaneka kwiimodeli ezisemgangathweni okanye ezikhuselekileyo. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, ii-notch ezimile nge-v zenza ukuba kube lula ukungena kwiityhubhu.
I-Screw-in Clamp ngeRubber (eLungisiweyo)
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, izikrufu zethu zerabha zisetyenziselwa ukukhwela imibhobho ezindongeni, iisilingi nakwimigangatho. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi iYurophu, Middle East naseAsia. Kwakhona, i-EPDM yerabha yokugquma yenzelwe ukunciphisa ingxolo.
123456 Okulandelayo> >> Iphepha 1/9